Maro no fandaharam-potoana ary isan’ny nisongadina tamin’izany ny fambolen-kazo tamina veleran-tany mirefy 7ha. Manodidina ny 1500 isa kosa ny zanakazo voavoly, raha ny tatitry ny ben’ny tanana ao an-toerana, Barthelemy Samuel Ravelonasy. Ankoatr’izay dia nisy koa ny hetsika maro toy ny lalao baolina kitra ho an’ny vehivavy, ny vako-drazana niarahan’ireo vehivavy tao amin’ny fokontany miisa 9 mandrafitra ny kaominina, ny fiaraha-misakafo… Sambany no nisy fivoahana nisintaka lavitry ny renivohitry ny kaominina toy izao, ho an’ireo vehivavy, hoy hatrany ny ben’ny tanana. 8 km miala ny renivohitra moa no nivoahana. Antony dia satria tanjona ny hamerina an’I Madagasikara ho tontolo maitso, hoy izy, satria efa tapitra ny ala atsinanana na dia noheverina tsy ho tapitra intsony aza. An’arivony ireo vehivavy nandray anjara ary latsakembok’izy ireo no nahafahany nividy ireo fanamiana nitovy nanaovany. Ny fitaterana sy sakafo, izany hoe omby iray sy vary na toha-dRazana no tena niantohan’ny kaominina, hoy hatrany ny fanazavana. Tsy maintsy miahy ny sosialim-bahoaka ny kaominina. Isan’izany ny fanamboaran-dalana sy sekoly. Efa manano-sarotra anefa ankehitriny ny mahita hazo hanamboarana izany. Toy izany koa ny fahasahiranana amin’ny fitadiavan-kazo hanorenan’ireo mponina ny fonenany, hoy hatrany ny fanazavany. Izany no mahatonga anay tsy mitsahatra mamboly hazo. Mifanaraka amin’ny kaominina mihitsy ireo mponina fa ho fananan’ireo mponina mihitsy ireo hazo volena ao amin’ny taniny rehefa lehibe, hoy izy, raha nanamafy io filana ny fanavotana ny ala ao ranomafana io.